” မိခင်ကို သူရဲ့လုပ်အားခလေးနဲ့ ရွှေ သိန်း ( ၆၀ ) ကျော်ဖိုးဆင်ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသားချောလေးဖြိုးရာဇာနိုင် “ – Cele Snap
” မိခင်ကို သူရဲ့လုပ်အားခလေးနဲ့ ရွှေ သိန်း ( ၆၀ ) ကျော်ဖိုးဆင်ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသားချောလေးဖြိုးရာဇာနိုင် “
ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြိုးရာဇာနိုင်ကတော့ မောင်မြင့်အဖြစ် ” မျက်လုံးမှာအလွမ်းနှုတ်ခမ်းမှာမာန ” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာမောင်မြင့် ဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ ပရိတ်သတ်အကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ MRTV – (4) ဇာတ်လမ်းတွဲ မင်းသားတစ်လက်ပါ။ ချောမောတဲ့ ရုပ်သွင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ယောကျာ်းပီသတဲ့ သွင်ပြင်ကြောင့် ပရိသတ်တွေသတိထားမိလာသူလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။
သူရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက အနုပညာကျောင်းဆင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ရောက်တဲ့နေရာမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအလားအလာရှိသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ငြာ တွေစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပါရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တာမို့ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်စတင်လျှောက်လှမ်းနေပြီလို့ ပြောရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း ဇာတ်လမ်းတွဲတင်မဟုတ်ဘဲ ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုရိုက်ကူးနေပြီလည်း သိရပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ”ကျနော့် ချွေးနည်းစာလေးနဲ့ အမေ့က်ို ရွှေ သိန်း 60 ကျော်ဖိုးဆင်ပေးနိုင်ပြီ 🥰 🎁အဖေနဲ့ အမေက အမြဲးသားသမီးအတွက် ရုန်းကန်ရတာပင်ပန်းနေပါပြီ …. 😞သားသမီးတွေအတွက်ဆိုဘယ်တော့မှလက်မတွန့်ဘူး ရှိရင်တစ်မျိုး မရှိရင်တစ်မျိုး အမြဲဖြည့်ဆည်ပေးခဲ့တယ် …အဖေ့အတွက် မလိုပါဘူး သားရယ် … အမေ့အတွက်မလိုပါဘူးသာရယ် ဆိုပြီး အမြဲးပြောခဲ့တယ်…. 😢သားသမီးလေးယောက်ကို ပညာတက်ဘွဲ့ရအောင် ပညာတွေသင်ပေးခဲ့တယ် … အဖေနဲ့အမေ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းခဲ့လဲ သားသိပါတယ် …😞 ရှေ့လျှောက် အဖေနဲ့အမေကို မျက်နှာမငယ်ရအောင် ထားမှာမို့ … ကျန်းမာရေးသာကောင်းအောင်နေပါနော် ….🥰🥰အရမ်းချစ်တယ် ဖေဖေ နဲ့ မေမေ 🥰🥰🥰”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ပြောပြခဲ့တာပါ။ တကယ့်ကိုကြည်နူးစရာပါပဲနော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ ဖွိုးရာဇာနိုငျကတော့ မောငျမွငျ့အဖွဈ ” မကျြလုံးမှာအလှမျးနှုတျခမျးမှာမာန ” ဇာတျလမျးတှဲထဲမှာမောငျမွငျ့ ဇာတျကောငျအနနေဲ့ ပရိတျသတျအကွိုကျတှခေဲ့တဲ့ MRTV – (4) ဇာတျလမျးတှဲ မငျးသားတဈလကျပါ။ ခြောမောတဲ့ ရုပျသှငျကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး ယောကျြားပီသတဲ့ သှငျပွငျကွောငျ့ ပရိသတျတှသေတိထားမိလာသူလို့လညျး ဆိုရမှာပါ။
သူရဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှကေ အနုပညာကြောငျးဆငျးတဈယောကျဖွဈတာနဲ့အတူ သရုပျဆောငျခကျြတှကေ ရောကျတဲ့နရောမှာ ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျပွီးအလားအလာရှိသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ကွျောငွာ တှစေတငျရိုကျကူးခဲ့ပွီး ဇာတျလမျးတှဲတှပေါရိုကျကူးနပွေီဖွဈတာမို့ အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးပျေါစတငျလြှောကျလှမျးနပွေီလို့ ပွောရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ခုနောကျပိုငျးတှမှောလညျး ဇာတျလမျးတှဲတငျမဟုတျဘဲ ရုပျရှငျကားကွီးကိုရိုကျကူးနပွေီလညျး သိရပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ ”ကနြေျာ့ ခြှေးနညျးစာလေးနဲ့ အမကျေို့ ရှေ သိနျး 60 ကြျောဖိုးဆငျပေးနိုငျပွီ 🥰 🎁အဖနေဲ့ အမကေ အမွဲးသားသမီးအတှကျ ရုနျးကနျရတာပငျပနျးနပေါပွီ …. 😞သားသမီးတှအေတှကျဆိုဘယျတော့မှလကျမတှနျ့ဘူး ရှိရငျတဈမြိုး မရှိရငျတဈမြိုး အမွဲဖွညျ့ဆညျပေးခဲ့တယျ …အဖအေ့တှကျ မလိုပါဘူး သားရယျ … အမအေ့တှကျမလိုပါဘူးသာရယျ ဆိုပွီး အမွဲးပွောခဲ့တယျ…. 😢သားသမီးလေးယောကျကို ပညာတကျဘှဲ့ရအောငျ ပညာတှသေငျပေးခဲ့တယျ … အဖနေဲ့အမေ ဘယျလောကျပငျပနျးခဲ့လဲ သားသိပါတယျ …😞 ရှလြေှ့ောကျ အဖနေဲ့အမကေို မကျြနှာမငယျရအောငျ ထားမှာမို့ … ကနျြးမာရေးသာကောငျးအောငျနပေါနျော ….🥰🥰အရမျးခဈြတယျ ဖဖေေ နဲ့ မမေေ 🥰🥰🥰”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ပွောပွခဲ့တာပါ။ တကယျ့ကိုကွညျနူးစရာပါပဲနျော။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
“သတို့သမီး ဂါဝန်လှလှလေး ၀တ်ပြီး ချစ်ရသူကြွေ စေမယ့် ပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စကားကြွယ်ပြနေတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း “